पशुपतिनाथका काठ ‘मक्किए’ – Mero Pradesh TV
काठमाडौं : पशुपतिनाथ मन्दिरको काठ कुहिएको छ। तीनतले मन्दिरको बीचको तलाका केही काठ कुहिएको हो। आँखीझ्याल अड्याउने फ्रेम कुहिएको हो।
विभागको विश्वसम्पदा शाखाका प्रमुख सुरेशसुरस श्रेष्ठको संयोजकत्वमा श्रीपशुपतिनाथ मन्दिर अध्ययन समिति गठन गरी मंसिर १ देखि काम थालिएको थियो। समितिमा विभागका इन्जिनियर शाखाका प्रमुख सम्पत घिमिरे, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरद्वय पुरुषोत्तम डंगोल र सुरज मल्ल, आर्किटेक्टद्वय शोभा महर्जन र सुदिन, पुरातŒव अधिकृत देवेन्द्र भट्टराई र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संस्कृति महाशाखाका प्रमुख प्रेमहरि ढुंगाना, इन्जिनियर पुरुषोत्तम खतिवडा र विसेट नाइके अरुण श्रेष्ठ छन्। बीच तलाको अध्ययन भइसकेको छ। भण्डारीलाई नौ दिन तालिम दिएर उक्त तलामा पठाइएको थियो। बाला चतुर्दशीको अघिल्लो दिन उनीहरू नागमणि र एकमुखे रुद्राक्ष निकाल्न त्यहाँ प्रवेश गर्ने चलन छ।
पशुपतिनाथको जग्गा खै ?
पशुपतिनाथमा नौ किलो सुन !
पशुपतिनाथकै सुरक्षामा प्रश्‍न ?
पशुपतिनाथको जग्गा प्रकरण : अदालतलाई टेरेन प्राधिकरणले
समितिले मूलभट्ट, भट्ट, भण्डारी, विसेट नाइकेलगायत सँगको समन्वय र सहकार्यमा काम गरिरहेको छ। तल्लो तलामा भएका चाँदी, काठ र गाह्रोको अवस्थाको परीक्षण चाँडै सुरु गर्ने संयोजक श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘काम सुरु गरेपछि बाँकी राख्न नहुने भएकाले मर्मत संयन्त्र तयार पारेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ’, श्रेष्ठले भने। यसका लागि अध्ययन समितिले कोषलाई पत्र लेख्नुपर्छ।
‘माथिल्लो तलाका लागि चारैतिर खट बाँध्नुपर्छ। छानो दबिएको छ कि ? काठ पुगेको हो होइन, पानी चुहिने पो भएको छ कि ? खट बनाउँदै तल्लो तलाको काम गर्दै जाने योजना छ’, ढुंगानाले भने।
कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकालले प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मर्मतको तयारी अघि बढाइने बताए। समितिलाई अध्ययन अवधि तोकिएको छैन। समितिका पदाधिकारीले प्रतिवेदन चाँडै तयार पार्ने बताएका छन्।